Raúl Martín dia paleo-mpanao sary malaza | Famoronana an-tserasera
Tamin'ity taona lasa ity dia nanana World Jurassic vaovao namaky ny firaketana rehetra biraon'ny boaty ary niverina izy hitondra antsika ireo dinôzôro tsy mampino hahaliana ny kely indrindra amin'ny trano sy ireo zokinjokiny izay faly tamin'ny Jurassic Park voalohany an'i Steven Spielberg.
Raúl Martín dia mpanao sary espaniola malaza indrindra amin'ny inona ny Paleontology ary ampiarahinay amin'ireto andalana ireto hahitana ny sasany amin'ireo fialamboly mahafinaritra nataony niaraka tamin'ny karazan-dinôzôro rehetra izay nandalo ny sainy mamorona sy ny tanany ho toy ny mpanao sary.
Mpanazava iray izay manana niara-niasa tamin'ny Scientific American and National Geographic ankoatry ny hafa ary ankehitriny isika dia faly amin'ny asany kanto sy kanto. Mpanakanto iray avy any Madrid izay nanolo-tena ho tantara an-tsary nandritra ny telo taona teo ho eo, izay niasa tao amin'ny masoivohon'ny dokambarotra ary nanolo-tena tamin'ny tena asany, izay tsy iza fa ny sary hosodoko sy sary.
Ampahan'ny ny sangan'asany dia azo jerena ao amin'ny Archaeological Museum of Alicante, ny Siansa voajanahary any Madrid na koa any Castilla La Mancha. Anisan'ireo tranombakoka malaza hafa, ho hitanao ny sanganasany ao amin'ny American Museum of Natural History na ny Museum Los Angeles.
Natokana indrindra i Martín tadiavo ny fampahalalana isan-karazany momba an'io dinôzôro io izay manolotra ny ohatra, manomboka amin'ny inona ny tontolo iainana onenan'ilay biby ka hatramin'ny karazan-java-maniry na biby hafa nozarany ny fisiany. Araka ny hitanao dia afindra amin'ny teknika fanoharana lehibe io miaraka amina endrika tena misy izay mamela antsika ho talanjona amin'ny kalitaon'ny takelaka tsirairay avy.
Ianao dia manana ny tranokalanao aiza no ahitanao ny ampahany lehibe amin'ny sangan'asany ka hahita mpanakanto mpanakanto iray izay mitondra antsika hiverina amin'ny fotoana hafa izay dinôzôro no manjaka ambonin'ny tany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Raúl Martín, ilay mpanazava ny Paleontology